Xukuumada oo Shariif Xasan ugu baaday in uu ka soo baxo Shirka – SBC
Xukuumada oo Shariif Xasan ugu baaday in uu ka soo baxo Shirka
Posted by editor on Apriil 12, 2011 Comments
Golaha Wasiirada Xukuumada KMG oo maanta kulan ku yeeshay Muqdisho ayaa sheegey in uusan matalin dowladda gudoomiyaha Barlamanka Shariif Xasan Sheekh Aadan iyagoo ugu baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan uu uga soo baxo shirkaasi.
Shir maanta ay isugu yimaadeen golaha Wasiirada Xukuumada KMG Soomaaliya oo uu shir gudoominayay Ra’iisul wasaare Farmaajo ayaa waxaa looga hadlay shirka maanta ka furmay Magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya ee ay soo qaban qaabisay Qaramada Midoobay.
Golaha Wasiirada xukuumada KMG Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in shirkaasi ay ka xuntahay dowladda KMG Soomaaliya islamarkaana aan lagala tashan hay’adaha dowladda KMG, balse qaban qaabadiisa ay leeyihiin hay’adda UNPOS iyo beesha caalamka.
Kulanka kadib ayaa warsaxaafadeed ay soo saareen golaha wasiirada Xukuumada KMG Soomaaliya waxaa saxaafada u aqriyay la taliyaha dhinaca warbaahinta ee ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Injineer C/raxmaan Cumar Cusmaan Yariisow,
Waxa uu sheegay Yariisow in xukuumada KMG ay ugu baaqeyso wafdiga uu horkacayo gudoomiyaha Barlamanka Shariif Xasan Sheekh Aadan ee ku sugan Magaalada Nairobi in gabi ahaanba ay isaga soo baxaan shirkaasi, waxaana sidoo kale sheegay in golaha wasiirada ay ugu baaqeen hay’adaha dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed in ay cambaareeyaan ka qeyb galka shirkaasi.
Gudoomiyaha Barlamanka Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa haatan ku sugan Magaalada Nairobi iyagoo ka qeyb galaya shirka ay soo qaban qaabisay Qaramada Midoobay, waxaana golaha wasiirada ee Xukuumada KMG ay sheegeen in uusan matalin gudoomiyaha Barlamanka labada gole ee dowladda KMG Soomaaliya.
C/risaaq Cismaan Axmed